Wednesday April 22, 2020 - 09:02:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
44 kamid ah maxaabiis 58 ruux ka koobnaa oo horraantii bishaan lagusoo qabtay howlgal melleteri oo ka dhacay dalka Nigeria ayaa geeriyooday khamiistii lasoo dhaafay, Yuusuf Toom oo ah dacwad soo oogaha guud ee dowladda Jaad ayaa usheegay warbaahinat in baaritaanno caafimaad oo lagu sameeyay meydadka maxaabiista laga helay caddeymo dheeraad ah.
Wuxuu sheegay in maxaabiistu ay cuneen cunto sumeysan sidaasna ay u dhinteen, wuxuu aad uga gaabsanayay in uu faah faahiyo waxa ay aheyd Sunta maxaabiista dishay arrinkaas oo banaanka soo dhigaya in dowladda Jaad ay qarinayso xaqiiqda dhabta ah ee ku aaddan sababta ay maxaabiistu udhinteen.
"Baaritaannada aan meydadka ku sameynay waxaa kasoo baxay in maxaabiistu ay isticmaaleen sun dilaa halis ah taas oo keentay in dhibaato soo gaarto wadnahooda halka qaarkood ay neef qabatoomeen" ayuu yiri dacwad soo oogaha Jaad.
Ilo wareed amniga oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka Faraniiska u sheegay in 58 maxbuus lagu xiray xabsi ka kooban hal qol islamarkaana muddo laba maalmood ah aan lasiin wax ay cabaan iyo wax ay cunaan taas oo dhalisay geerida 44 maxabuus.
Max'med Nuur Axmed Ebiidu oo ah xoghayaha guud ee difaaca xuquuqul insaanka Jaad ayaa wixii dhacay ku tilmaamay wax argagax leh oo si bareer ah loogu geystay maxaabiis laga qaaday dhammaan xuriyaddii ay lahaayeen.
Jumca Carabi oo ah wasiirka cadaaladda xukuumadda dabadhilifka Jaad ayaa beeniyay dhammaan eedaymaha loo jeediyay ee ah in ay mas'uul ka ahaayeen dhimashada maxaabiistan oo katirsanaa jamaacada Ahlu Suna Li dacwah ee ka dagaallanta Nigeria warbaahintuna ay utaqaan Boko Haram.
"Calooshooda ayaan ka helay maaddo sun ah arrintu ma ismiidaamin jamaaci ah baa mise? jawaabta su'aashaas illaa iyo hadda baaritaanno ayaan ku wadnaa" ayuu si jees jees leh u yiri ninka ku magacaaban wasiirka cadaaladad Jaad.
Maxaabiistan sida dhagarta ah loogu laayay xabsigii ay ku xirnaayeen ayaa lagusoo qabtay howlgal uu Idiris deebi madaxweynaha Jaad ugu magac daray "Carada Boomba" kaasi oo bilaawday 31 March 2020 todobo maalin kadib markii jamaacada uu hoggaamiyo Abubakar Shekaw ay weerar ku dishay 100 askari Tashaadiyiin ah.
Dowladda kajirta wadanka Jaad ayaa dabadhilif u ah Faransiiska iyo xulufadiisa waana dowlad caan ku ah in ay cadaadiso islaamka iyo ehelkiisa iyadoo ku marmarsiyoonaysa la dagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada.